Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Nigeria Emmanuel Dennis Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Emmanuel Dennis Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ezinụlọ, Ndị nne na nna, Nwanne Ikpeazụ (Popti), Ndụ, Nwanyị, Net Worth, na Ndụ Nke Onwe.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na -ewetara gị njem ndụ onye ọkpọ ahụ, site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji mebie agụụ akụkọ ndụ gị, nke a bụ oge ọ bụ nwata ruo ebe okenye - nchịkọta zuru oke nke Emmanuel Dennis Bio.
Roberto Pereyra Ụmụaka Akụkọ nke Na-adịghị Ekefu Ihe Ọ Bụla
Nchịkọta akụkọ ndụ nke Emmanuel Dennis. Lee akụkọ ndụ ya na ebili.
Ee, onye ọ bụla maara maka ebumnuche mgbaru ọsọ ya na ọmarịcha nka dribbling. Agbanyeghị, ọ bụ naanị ndị hụrụ egwuregwu ole na ole n'anya nwere ntakịrị echiche etu o siri pụọ n'ịchụso ọrụ nchụaja (ka ọ bụrụ nna na -asọpụrụ) wee bụrụ onye mmeri nwere nka.
N'ihi ya, anyị akwadebela ngwugwu ihe ncheta ya, nke ga -atọ gị ụtọ. N'atụghị egwu ọzọ, ka anyị bido.
Emmanuel Dennis Childhood Akụkọ:
Maka ndị na-ebido ndụ ihe nkiri, ọ na-aza aha 'The Nigerian Neymar'. Emmanuel Bonaventure Dennis mụrụ na ụbọchị 15th nke Nọvemba 1997 na nna na nne ya amachaghị na Yola, Nigeria.
Onye gburu ya bụ ọdụdụ nwa n'ime ụmụaka abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya. O doro anya na ọ nwere akụkọ nwata na-atọ ụtọ nke na-esite na ụkpụrụ ọtụtụ ndị egwuregwu.
Nathaniel Chalobah Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Ndị mụrụ ya zụlitere ya na nwanne ya nwoke ahaghị aha na ibe Bio ya.
Nke bụ eziokwu bụ na Dennis enwebeghị mkpebi siri ike dịka Kelechi Iheanacho na Victor Osimhen ịchụso ọrụ ịgba bọl dịka nwatakịrị. Naanị ihe ọ na-eme bụ ịnụ ụtọ oge ọ bụla ya na ndị ọgbọ ya ji bọl n'okporo ámá.
N'oge ahụ, nwa okorobịa ahụ gbalịsiri ike na -eme nke ọma na egwuregwu ahụ. Nke a mere ka ndị enyi ya ghara ịhọpụta ya ka ọ sonyere ndị otu ha.
Odion Ighalo Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
Ụkpụrụ Golden Football:
Ọ dị mkpa iburu n'uche na Dennis (mgbe ọ na -etolite) gbara ama Iwu iri nke ịgba bọọlụ n'okporo ụzọ ụmụaka na Nigeria ka ọ bụrụ ọkaibe. Ha gụnyere;
Nwa ọ bụla nwere bọọlụ bụ onye mbụ ga -ahọrọ onye otu ya.
Nwa kachasị abụba n'etiti ndị enyi nwata ya bụ onye ga -abụ onye mgbaru ọsọ.
Bọọlụ nwere ike ime na mmiri ozuzo wee kwụsị mgbe ike gwụrụ onye ọ bụla.
Egwuregwu bọọlụ na -akwụsị mgbe Dennis na ndị enyi ọ bụla ọ bụ nwata nụrụ mpi nna ha.
Ọ bụrụ na mmadụ ahọrọ onye ikpeazụ, ọ pụtara na onye ahụ efunahụla ma ọ bụ ikekwe amaghị ka esi egwu bọọlụ. Nke ahụ bụ mgbe niile maka Dennis.
Nwa nwoke a na - ahọtutụbeghị nwere ọrụ nke ịchọta bọọlụ mgbe ọ rapaara n'okpuru ụgbọ ala ma ọ bụ ọwara. Site n'ime nke ahụ, ọ ga-egwu na egwuregwu ọzọ.
Mgbe onye nwe bọọlụ were iwe, enwere ike iwepụ egwuregwu ahụ.
Nwa okoro ọ bụla na-etinye akpụkpọ ụkwụ anaghị ekwe ka ọ kpọọ, ọkachasị mgbe ndị ọzọ gbara akpụkpọ ụkwụ.
Enweghị onye nchịkwa na ndị isi, nke pụtara na onye ọ bụla nwere ike iji bọl gbaa ọsọ ọbụna n'azụ ihe mgbaru ọsọ.
Ịgba bọọlụ n'ime ogige onye agbata obi ara na -egosi egwuregwu karịrị.
Moussa Sissoko Child Story Plus Ihe Ntughari Ihe Odighi
Emmanuel Dennis Na -etolite Ụbọchị:
A zụlitere onye ama ama ama ama ama ama na Naịjirịa. Dị ka ọtụtụ ụmụaka si na mpaghara ugwu nke obodo ya, Dennis bụ nwatakịrị na -enweghị nlekọta nke na -etinyechaghị uche na okomoko.
N'ezie, o bu n'obi ịgbanwe onwe ya ka ọ bụrụ nwa okorobịa nwere ike ịkwado ego n'ọdịnihu. Agbanyeghị, ọ naghị echegbu onwe ya ịnweta naanị uwe ole na ole na ịnweghị ụdị egwuregwu kachasị ọhụrụ n'oge a.
Ọbụna uwe ya gosiri na onye na -eme egwuregwu na -abịa adịghị achọsi ike maka okomoko. Ee, ọ zụlitere umeala n'obi.
Ị maara?… Mgbe ọ na -etolite, Emmanuel Dennis chọrọ ịghọ ụkọchukwu Katọlik. N'ikpeazụ, ọ gbanwere obi ya ịchụso ọrụ ọzọ. Mana maa gịnị?… Football abụghị nhọrọ ya ọzọ.
Lelee ihe o kwuru n'omume ya ọzọ mgbe ọ gbanwechara uche ya gbasara ọkwa nchụaja na vidiyo dị n'okpuru.
Ezinụlọ Ezinụlọ Emmanuel Dennis:
Dika ihe ngosi ahuhu si di, ulo ya abughi ogaranya site n'oge mbu nke ndu ya. Agbanyeghị, ha na-eme nke ọma dịka ọtụtụ ezinụlọ n ’etiti klaasị iji kwado ndụ ha na Nigeria.
Richarlison Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ufodu mmadu kwenyere na nna Dennis bu onye agha. N'ihi ya, ọ ga-abụ na ọ bi n'ogige ahụ ma nwee ọzụzụ si agha.
Agbanyeghị na onye ọkpọ ahụ agọnarịghị eziokwu gbasara ọrụ nna ya, a ka ga -egosipụta izi ezi nke ụdị nkọ a.
Mmalite Ezinụlọ Emmanuel Dennis:
Agbanyeghị na ịdekọ nnukwu ihe ịga nke ọma na Europe, onye ọkpụkpọ bọọlụ anaghị echefu oge niile ịmata ebe ọ bụ. Ọ bụ onye Naịjirịa ma si n’isi obodo Yola di na Steeti Adamawa.
Abdoulaye Doucoure Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma
Maapụ nke Federal Republic of Nigeria, na -egosi ebe Dennis si.
Ebe Dennis si bịa bụ nke mejupụtara agbụrụ Fulani. Yola bụ ebe ugwu Mandara na Shebshi yana ebe nke abụọ kachasị elu (2,042 m) na Nigeria-Dimlang Peak.
Emmanuel Dennis Mmụta:
Mgbe o mere okenye, nne na nna ya na -ahụ n'anya debara aha ya n'otu n'ime ụlọ akwụkwọ praịmarị dị ya nso. N'ịhụ na enwechaghị ihu ọma ya n'oge nhọrọ otu ọ bụla n'okporo ụzọ, Dennis lekwasịrị anya n'ọmụmụ ihe ya.
Ụmụaka Troy Deeney Akụkọ nke Na-adịghị Ekepụta Ihe Akụkọ
Na mbu, o bu n’obi ime akara nke ọma ma debanye aha na seminarị. Ka oge na-aga, ọ gbanwere obi ya wee tụlee ịghọ dọkịta kama ịbụ ụkọchukwu.
Agbanyeghị, nwata nwoke ahụ si na mkpọmkpọ ebe amaghị na akara aka na -akpa nkata maka ọrụ ya dị iche.
Emmanuel Dennis Football Akụkọ:
Ọ bụ ezie na ọ na -adịkebeghị egwu ịgba bọl, onye ọkpọ ahụ nwere ohere iwere nka ya ju ndị na -agafe agafe anya n'ụbọchị ụbọchị ọma. Mgbe ọ bụla ọ na -eme nke ọma, ndị agbata obi ya ga -eji obi umeala gbaa ya ume ka ọ nọgide na -azụ ikike ya.
Ismaila Sarr Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Ka oge na -aga, nne na nna Dennis ghọtara na nwa ha nwoke nwere ọdịnihu na bọl. Agbanyeghị, ha bi na mpaghara ugwu nke mba ahụ, nke enweghị akụrụngwa nwere ike inyere ya aka ịbụ onye egwuregwu na -eme nke ọma.
N'ihi ya, ha mere ka ọ kwaga mpaghara isi obodo etiti, ebe o sonyere na Accademia di Abuja na 2010.
Nke a bụ onye egwuregwu bọọlụ nwere akara ngosi ebe ọ ka na -agbasi mbọ ike inwe ọganihu.
N'ezie, nne ya na-echegbu onwe ya na nwa ya nwoke dị afọ 13 ga-anọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ n'enweghị nlekọta nne na nna. Mana mkpebi ha ikwe ka ọ zụlite talent ya na klọb bụ nhọrọ mara mma.
Emmanuel Dennis Ndụ Ndụ Mbụ:
Obi abụọ adịghị ya, ọ ga -agarịrị ọtụtụ ịchacha na ọzụzụ siri ike iji tinye onwe ya na egwu ndị ọkachamara. N'ezie, Dennis raara afọ isii mbụ ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ maka imepụta ikike ịgba bọọlụ ya.
Ọ bụ ezie na njem ahụ siri ezigbo ike, uru ya karịrị akarị. Na 2016, Dennis dekọtara ọrụ izizi mbụ ya ka ọ bịanyere aka na ụlọ ọgbakọ Premier League - Zorya Luhansk.
Dị ka a tụrụ anya ya, arụmọrụ ya na klọb mbụ ya bụ ihe ịtụnanya na Manchester City bịara na -arịọ arịrịọ maka mbinye aka ya. N'ụzọ dị mwute, nkwekọrịta ya na ndị otu EPL emezughị. N'ihi ya, o jiri Zorya Luhansk mechie oge ezumike nke 2016 - 17.
Emmanuel Dennis Biography - Okporo Ụzọ Ebube Akụkọ:
Ị maara?… Neymar. Ka a sịkwa ihe mere na ha alaghị azụ ịkpọ ya onye Nigeria Neymar.
Site na ọsọ ya na ike dribbling, Club Brugge hụrụ mkpa ọ dị ịgụnye ya na ngwa agha ha. Ya mere, ha mere ka Dennis tinye aka na nkwekọrịta 4 afọ na ha maka ego atụmatụ nke million 1.2 nde.
Ọ dabara nke ọma, ọ meriri klọb ahụ mmeri nke Belgium Division nke mbụ A-League ugboro abụọ (2017-18 na 2019-20). Otu eziokwu dị egwu bụ na onye ọkpọ ahụ nụrụ banyere mmeri klọb nke abụọ ya site na akara mkpado na Instagram.
Ịnweta iko nke ọkwa ọkwa dị elu nke Belgium bụ nrọ rutere onye na-awakpo ya. Ọ na -atụ anya inweta ihe nrite ndị ọzọ.
N'ụzọ na -akpali mmasị, onye mwakpo ahụ dekọrọ oge dị ebube na ọrụ ya mgbe o meriri ihe nkwado megide Real Madrid na 2019-20 UEFA Champions League. Obi tọrọ ya ezigbo ụtọ na o mere ememme ọ bụla dịka ọkacha mmasị ya - C. Ronaldo.
Ọ nweghị nhọrọ ọzọ karịa i mimomi mmemme nke onye nlereanya ya na football. Ọ dekọrọ ọdịda zuru oke dịka C. Ronaldo?
Obi dị m ụtọ mgbe mụ na ndị enyi m kwurịtara maka igwu egwu megide Real Madrid. Ọ bụ ihe ọchị zuru oke, agwara m ha na m ga -akara ma mee mmemme 'Cristiano Ronaldo' Siiiiii '.
Ha dị ka 'ị ji n'aka?' m wee sị 'ee', yabụ anyị nwere nzọ. N'ikpeazụ, agbatara m akara na enwere m obi anụrị ịme mmemme ahụ.
Emmanuel Dennis Biography - Akụkọ ịga nke ọma:
Naịjirịa achọghị onye dibịa afa ga -agwa ha na ha ga -akwadọ ndị otu ha ihe egwuregwu bọọlụ na -eto eto. Dịka ihe ngosi ya maka obodo ya, ezigara Dennis na mbinye ego ka ọ sonyere FC Koln na Jenụwarị 2021.
Nlele maka mgbe ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ na -eme nke ọma wee gosipụta maka obodo ya na klọb Bundesliga.
Na-atọ ọchị, o mere naanị ọhụụ itoolu maka ụlọ ọrụ German tupu ya emesịa mechie afọ 5 ọhụụ na Watford na June 2021.
Nkwekọrịta ya na ndị otu Bekee ruru nde € 4. Ugbu a, Akụkọ ndụ ya emeela nke ọma ka ọnọdụ ego ya na -abawanye nke ukwuu. Ndị ọzọ, dị ka ha na -ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọkwaga ya na Watford ga -eme ka ọ bụrụ onye a ma ama karịa ka o nweburu.
Emmanuel Dennis enyi nwanyị/nwunye:
N'enweghị mgbagha, onye Naịjirịa Neymar bụ onye asọmpi siri ike ma a bịa n'ọkwa onye ama ama ama ama ama ama n'Afrịka. N'adịghị ka Bright Osayi-Samuel, Dennis ewulite ndụ ịhụnanya na enyi ya nwanyị a na-akọwaghị.
Amata enyi nwanyị ya ka bụ ihe omimi nye ndị na -akwado ya na ụwa niile.
Ee, onye na-awakpo ahụ nwere mmekọrịta dabara adaba nke na-anaghị egbochi ọrụ ya. Agbanyeghị, ọ kpugherela aha enyi nwanyị ya na ndị egwuregwu bọọlụ.
Omume Emmanuel Dennis:
Onye na-aga n'ihu nwere ike ọ gaghị abụ onye dị umeala n'obi karịa ndị egwuregwu niile, mana o nwere agwa pụrụ iche. Dị ka anyị niile maara, onye ọ bụla nwere oke ịkpa agwa. Agbanyeghị, ọ dịghị mma na akọwapụtara ha dabere na ntụpọ ha.
Ụmụaka Jọshụa Akụkọ Akụkọ nke Na-adịghị Ekefuo Ihe Ndị Na-akpata
N'edemede a, ọ gaghị abụ ihe na -ekwesịghị ekwesị ikpe Dennis ikpe n'ihi nkwenkwe ya na ụkpụrụ ya na ọ gaghị emebi ihe ọ bụla. Ọ tụfuru otu egwuregwu megide Dortmund otu oge n'ihi na ọ nweghị ike ịnọdụ n'oche ọ na -anọbu. Ọ dị egwu, ọ dị mma?
N'ime ọtụtụ afọ, Dennis ewulitela ndụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya karịa onye ibe ya, Folarin Balogun. Otu ihe ntụrụndụ kacha amasị ya bụ igwu mmiri. Ee, onye na -aga n'ihu na -enwe mmasị ịnọ naanị oge ụfọdụ ịnọ jụụ n'ime ọdọ mmiri.
Kedu ihe nwere ike ịdọrọ uche ya ka ọ na-anọdụ jụụ na ọdọ mmiri ahụ? N'ezie, igwu mmiri na-enyere ya aka izu ike mgbe ogologo ụbọchị si na pitch.
Eziokwu Emmanuel Dennis:
Nwatakịrị ọ bụla tolitere na mkpọmkpọ ebe na-echekarị ndụ ka mma. Obi dị m ụtọ na ebumnuche Emmanuel Dennis ịgbanahụ ụbịam ụbịam mechara bụrụ eziokwu.
Ebe ọ bụ na o dekọrọ ihe ịga nke ọma n'egwuregwu bọọlụ, onye Naịjirịa Neymar anaghị anapụ onwe ya ibi ndụ okomoko.
Dị ka a tụrụ anya ya, ọ zụtala ụdị ụgbọ ala pụrụ iche. Ewezuga ịnya ụgbọ ala ya, Dennis na -enwekarị obi ụtọ ịnya ụgbọ elu nkeonwe oge ọ bụla ọ gara njem dị anya. Lelee ntakịrị ụdị ndụ ya na foto dị n'okpuru.
Nlele maka ndụ okomoko nke onye egwuregwu Afrịka mụrụ.
Ezinụlọ Emmanuel Dennis:
N’ime afọ ole na ole gara aga, ndị na-akwado ya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-achọ ihe ọmụma banyere ezinụlọ ya dum. N'ihi ya, anyị etinyela ụfọdụ ihe mara mma gbasara ezinụlọ Dennis n'okpuru.
Banyere Emmanuel Dennis Nna na Nne:
Enweela ihe ọmụma ụfọdụ na-emegiderịta onwe ha banyere nne na nna onye na-eti ihe. Ufodu mmadu kwenyere na nna ya bu onye agha nke zulitere Dennis na nwanne ya nwoke n’ime ulo agha. Ebe ndị ọzọ na-eche na ndị mụrụ ya anwụọla.
Site na ile anya, nne Dennis na nna ya ka di ndu. Ọ bụ naanị na ọ naghị ekwu banyere ha. N'otu n'ime ọrụ mgbasa ozi ya, onye Naijiria meriri ihe mgbaru ọsọ abụọ ma rara onwe ya nye nne na nna ya.
Nke a gosiri na nne na nna ya ka dị ndụ ma nwee ahụ ike. Anyị nwere olile anya na ọ ga -egosi ụwa foto nna ya na nne ya.
Banyere ụmụnne Emmanuel Dennis:
N'oge ihe ọjọọ, nwanne nwanne Dennis nke okenye na -adị njikere mgbe niile ịkwado ya. Aha ya bụ Popti Emmanuel Dennis, ọ bụkwa onye egwuregwu. N'ụzọ dị mwute, Popti tụfuru ndụ ya n'otu njem njem ya na Lagos, Nigeria.
Foto na -adịghị ahụkebe nke nwanne nwoke egwuregwu, Lt. Popti Emmanuel Dennis.
Ihe nhụsianya ahụ mere na 2020 mgbe ụgbọ mmiri nke nwanne Dennis kpuru n'ihi ụfọdụ ihe amaghị. Mgbalị niile ịchebe ndụ onye na-eme egwuregwu ghọrọ ihe nzuzu dịka ọ hapụrụ mmụọ naanị ụbọchị 10 tupu ekeresimesi.
Banyere ndị Emmanuel Dennis:
Onweghi ihe dị oke mkpa dị ka isoro ezinụlọ ya nọrọ. Kaosinadị, Dennis ekpugheghị ozi ọ bụla gbasara nne na nna ya ochie na ndị ikwu ya ọzọ mgbe ọ na-ede akụkọ ndụ a.
Emmanuel Dennis Eziokwu Eziokwu:
Iji chịkọta akụkọ ndụ onye na -eme egwuregwu, nke a bụ eziokwu ole na ole gbasara ya nke ga -enyere gị aka inweta ihe ọmụma gbasara akụkọ ndụ ya.
Eziokwu # 1: Net Worth na Salary Break Down:
Ka ọ na -erule afọ 2021, Dennis kpakọbara atụmatụ ruru nde € 1. N'ezie, afọ ọrụ ya na -esote ga -ahụ ọtụtụ mmezi ego. Tupu ịkwaga Watford, onye ọkpọ ahụ na -enweta Club Brugge ụgwọ ọnwa kwa afọ nke € 350,000.
ENBỌCH / / EGO
Emmanuel Denis Ndahie ụgwọ ọnwa 2020 (na Nigerian naira ₦)
Kwa Afọ: ₦ 531,537,958
Ọnwa kwa: ₦ 44,294,829
Kwa Izu: ₦ 10,206,182
Kwa :bọchị: ₦ 1,458,026
Kwa elekere: ₦ 60,751
Nkeji nkeji: ₦ 1,012
Kwa Nke Abụọ: ₦ 17
Dabere na nyocha anyị, otu nwa afọ Naijiria ga -arụ ọrụ afọ atọ na ọkara iji mee ihe Dennis na -enweta n'ime otu ọnwa.
Anyị enyochapụtala ụgwọ ọrụ ya dị ka elekere na-akụ. Lelee ego ole ọ rụpụtara kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Emmanuel Dennis 'Bio, nke a bụ ihe o nwetara.
Eziokwu nke abụọ: Okpukpe Emmanuel Dennis:
Agbanyeghị na amụrụ ma zụlite ya na mgbago ugwu ebe Islam bụ okpukpe kachasị, ọ nọgidere na -enwe okwukwe Ndị Kraịst ka ọ kwụsie ike. Dennis bụ onye Katọlik na -anụ ọkụ n'obi bụ onye chọsiri ike ịbụ ụkọchukwu tupu ịtụgharị nhọrọ ọ họọrọ n'egwuregwu.
Eziokwu # 3: FIFA stats:
N'ụzọ na-akpali mmasị, Dennis 'Stats na-egosi na ọ nwere nnukwu ahụ ike, ọsọ ọsọ, na ikike ịba ụba iji nyere ya aka ịchọta ụzọ ya na ndị agbachitere. Nke a na-eme ka ọ tozuo dị ka ezigbo onye egwu nke nwere ike ịmị mkpụrụ maka otu ya n'oge egwuregwu.
O nwere ụfọdụ àgwà na-adọrọ adọrọ nke nwere ike ịmanye gị itinye ya na akara gị na njikwa.
Tebụl dị n’okpuru na-ekpughe obere ozi banyere Emmanuel Dennis. Ọ na - enye gị ikike ịbelata site na profaịlụ Naịjirịa ọsọ ọsọ ka enwere ike.
Azịza nke Wiki
Aha n'uju: Emmanuel Bonaventure Dennis
aha otutu: Nwaafọ Naịjirịa bụ Neymar
Age: 23 afọ na ọnwa 10.
Ụbọchị ọmụmụ: 15 nke November 1997
Ebe amụrụ onye: Owerri, Nigeria
Nna: N / A
Nne: N / A
Nwanna: Popti Emmanuel Dennis
Nwa nwanyi: N / A
Ezigbo Net: € 1 nde
Rygwọ ọnwa kwa afọ: € 350,000
elu: 1.74 m (5 ft 9 na)
N'ezie, ahụmịhe nwata ya kere ihe dị ala nke mere ka ọ chee na ya ezughi oke maka egwuregwu ahụ. Agbanyeghị, Dennis nwere ihu ọma inwe nna na nne na -ahụ n'anya, yana ụfọdụ ndị agbata obi gbara ya ume ka ọ nwaa ịgba bọọlụ.
Nkwado zuru oke ha na-agba maka egwuregwu ya enyerela ya aka iru oke ama ama. O doro anya, Dennis ga-agba mbọ nye ezinụlọ ya ụdị ndụ dị mma ha kwesịrị iji kwado ya mgbe ọ na-enweghị ihe ọ bụla.
Dabere na Atlantic, Watford nwere ihu ọma bịanye aka na Dennis dabere na ịgba chaa chaa agbakọọla. Anyị nwere olile anya na nnukwu ike ya ga -enyere klọb ọhụrụ ya aka ịga nke ọma karịa atụmanya ha n'oge oge na -abịa.
Daalụ maka ịgụ ọdịnaya anyị na -etinye na Emmanuel Dennis Childhood Story Plus Untold Biography Facts. Jiri nwayọ hapụ echiche gị gbasara akụkọ ndụ a na ngalaba nkọwa n'okpuru.